Man United oo dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib guul ay ka soo gaareen Fulham – Gool FM
(London) 21 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dib ugu soo laabtay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib markii ay 2-1 uga soo adkaadeen Fulham oo ay booqdeen.
Kooxda martida loo ahaa ee Fulham ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqaddii 5-aad kaddib markii Ademola Lookman uu ugu shubay xiddigaha Man United kubbad ay garab dhaaf u haysteen.
Yeelkeede, Man United ayaa ciyaarta barbaro ku soo celisay waxaana fusad birta kaga dhacday Bruno Fernandes markalena ay soo abuurtay uu dhammaystiray Edinson Cavani 21’daqiiqo, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta 65’daqiiqo Man United ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay waxaana kubbad bidix ahayd u dhaliyey Paul Pogba oo qaab ciyaareed fiican ku jira kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 soo laabasho ah oo ay Manchester United soo gaartay.
Manchester United ayaa sidaas ku ah kooxda aan looga soo adkaan bannaanka kulammada horyaalka Premier League illaa iyo haatan, waxaana ay hoggaanka horyaalka Premier League ku qabteen 40-dhibcood, Man City iyo Leicester City ayaana ku soo xiga oo wada leh min 38-dhibcood inkastoo Sky Blue uu hal kulan u harsan yahay.